ပေါင်မုန့်စာရွက်အိမ်မှာကောက်ခြင်းနှင့်စာလုံးပေါင်း - သင့်ကျန်းမာရေးကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေ - Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » လက်ခံဖြတ်ပိုင်းများ "ပေါင်မုန့်ကြော်အိမ်မှာကောက်ခြင်းနှင့်စာလုံးပေါင်း - သင့်ကျန်းမာရေးကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေ
ပေါင်မုန့်စာရွက်အိမ်မှာကောက်ခြင်းနှင့်စာလုံးပေါင်း - သင့်ကျန်းမာရေးကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေ
Tele RELAY တစ်ခု 21 ဇူလိုင်လ 2019
ပေါင်မုန့်ဂျုံအများအပြားအိမ်ထောင်စုအတွက်အဓိကအစားအစာဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်လူများစွာရှိသောကြောင့်စားသုံးရှောင်ရှားရန်စတင် သန့်စင်ပြီးမုန့်ညက်, ကစီဓါတ်များနှင့်ဆိုဒီယမ်၎င်း၏အကြောင်းအရာကျန်းမာရေး option ကိုမရှိကြပေ။ အခြားအခြားရွေးချယ်စရာကြိုးစားရန်လိုပါသလား? တစ်အောင်ဘယ်လိုဤဆောင်းပါး၌ရှာဖွေတွေ့ရှိ ကောက်မုန့်အိမ်သူအိမ်သား နှင့်စာလုံးပေါင်း။
မွမ်းမံအဖြူရောင်မုန့်မတူဘဲ, ဒီစာရွက်ဟာသူတို့ရဲ့ဂုဏ်သတ္တိများကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်ပြည့်စုံပါဝင်ပစ္စည်းများပါဝင်ပါသည်။ ကောက်ခြင်းနှင့်စာလုံးပေါင်းသုခချမ်းသာမြှင့်တင်ရန်ကြောင်းအစားအသောက်ဖိုင်ဘာ, antioxidants များနှင့်ဗီတာမင် B နှစ်ခုစလုံးအရေးကြီးသောသတင်းရင်းမြစ်ဖြစ်ကြသည်။ ကြိုးစားရန်စောင့်ဆိုင်းမနေပါနဲ့!
ရိုးရာမုန့်ဂျုံကိုအစားထိုးသောချက်ပြုတ်နည်းများမြင့်တက်လျက်ရှိသည်။ ထို့ကွောငျ့ကြှနျုပျတို့ယခုကျွန်တော်တို့ကိုဒီအစားအစာကိုခံစားရန်ခွင့်ပြုကြောင်းအခြားရွေးချယ်စရာအမျိုးမျိုးရှိသည်။ အဆိုပါအိမ်လုပ်ပေါင်မုန့်ကောက်ခြင်းနှင့်စာလုံးပေါင်းသင်အိမ်မှာပွငျဆငျနိုငျသောသူတို့ရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
အဆိုပါပါဝင်ပစ္စည်းများအလွယ်တကူမရရှိနိုင်ပါဖြစ်ကြပြီးပြင်ဆင်မှုခြေလှမ်းများအတော်လေးရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်ကြသည်။ တောင်မှပိုကောင်း, ဒီစာရွက်ဘာလို့လဲဆိုတော့အများဆုံးအစားအစာတွင်ထည့်သွင်းနိုင်ပါသည် ဒါကြောင့်တွေဟာအစာကြေဖို့လွယ်ကူပြီးအာဟာရဓာတ်ပြည့်ဝ၏ ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများနှင့်အလေးချိန်.
ကောက်သန့်စင်ပြီးအစေ့မှအကောင်းတစ်ဦးကအခြားရွေးချယ်စရာဖြစ်ခြင်း၏ဂုဏ်သတင်းကိုရရှိခဲ့သည်သောအစားအစာများကိုတစ်ဦးဖြစ်ပါသည်။ တစ်အာဟာရရှုထောငျ့မှ, ၎င်း၏အဆင့်မြင့်သံစားသုံးမှုအားဖြင့်ခွဲခြားထားသည်။ အမှန်မှာက% နေ့စဉ် 18 အထိဖုံးလွှမ်း။
ဒါဟာအစကိုပိုမို phosphorus ကို, မဂ္ဂနီဆီယမ်, ဗီတာမင် B နှင့်အလားတူဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်အတူအခြားအစားအစာများထက်အစားအသောက်ဖိုင်ဘာပါရှိသည်။ ထိုမှတပါး, ဘိုဟိုက်ဒရိတ်မှတဆင့်ကောက်ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများစွမ်းအင်, သန့်စင်ပြီးဘိုဟိုက်ဒရိတ်နှင့်မတူဘဲသွေးတွင်းသကြားဓာတ် spikes ထုတ်လုပ်ကြပါဘူး။
ဤသည်သီးနှံအတွက်အခြားသောအရာတို့ကိုအကြား, ပါရှိသည် lysineအခြားအစီရီရယ်အတွက်လက်ဆောင်မပေးကြောင်း, တစ်ဦးအမိုင်နိုအက်ဆစ်။ ၎င်း၏အဆီအကြောင်းအရာ (သာ 1,7%) အတော်လေးနိမ့်သည်နှင့်က oxidative စိတ်ဖိစီးမှုဆန့်ကျင်တိုက်ပွဲကူညီ antioxidants ပေးပါသည်။ ကောက်၏အခြားအကျိုးခံစားခွင့်များမှာ:
စာလုံးပေါင်းက၎င်း၏နေဖြင့်ခွဲခြားထားပါသည် High-ဘိုဟိုက်ဒရိတ်, ပရိုတိန်း, ဗီတာမင်နှင့်သတ္တုဓာတ်။ ဤသည်သီးနှံဘုံဂျုံနှင့်၎င်း၏နိမ့်များသောအညွှန်းကိန်းထက်တွေဟာအစာကြေဖို့ပိုပြီးလွယ်ကူသည်။ ထို့ကြောင့်နှင့်အတူလူများအတွက်စံပြအစားအစာဖြစ်ပါတယ် ဆီးချိုရောဂါ သို့မဟုတ်ဇီဝဖြစ်စဉ်မမှန်။ အသေးစိတ်အတွက်, စာလုံးပေါင်းပါဝင်ပါသည်:
အကြောင်း 15% ပရိုတိန်း
B1 B2 နှင့်ဗီတာမင်များ
ထိုကဲ့သို့သောကယ်လစီယမ်, မဂ္ဂနီဆီယမ်, ဖော့စဖောရက်နှင့်ပိုတက်စီယမ်အဖြစ်သတ္တုဓာတ်
ကိုယ့်ကောက်သည်အတိုင်း, စာလုံးပေါင်း lysine ပါရှိသည်။ ဤသည်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ဦးတည်း synthesize ပါဘူးတဲ့အမိုင်နိုအက်ဆစ်ဖြစ်ပါသည် အဘယ်သူ၏ဝါးမြိုခြင်း, ကယ်လစီယမ်စုပ်ယူမှုကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်ဟော်မုန်းထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်ကိုအားကောင်းရန်အရေးကြီးသည်။
ဒါ့အပြင်ဖတ်ပါ: တစ်မုန့်အနိမ့် carb ပြင်ဆင်ထားရန်2ချက်ပြုတ်နည်းများ
အဆိုပါအိမ်လုပ်ပေါင်မုန့်ကောက်ခြင်းနှင့်စာလုံးပေါင်းတစ်အရည်ရွှမ်း option တစ်ခုဖြစ်သည် မှာပျော်မွေ့ နံနက်စာ ဒါမှမဟုတ်ရေစာအဖြစ်။ တဦးတည်းပင်အထဲတွင်လောင်နိုင်ပါတယ် အဓိကအစားအစာမှာဟင်းချိုသို့မဟုတ်ခေါက်ဆွဲဖို့ accompaniment ။ သင်တို့သည်လည်းနောက်ပိုင်းမှာ grilling များအတွက်ချပ်အေးခဲနိုင်ပါတယ်။ သငျသညျအဆင်သင့်ဖြစ်ပါသလား
1 /2ခွက်ကိုအပြည့်အဝကောက်မုန့်ညက် (100 ဂရမ်)
2 ခွက်အပြည့်အဝမုန့်ညက် (400 ဂရမ်) စာလုံးပေါင်း
လတ်ဆတ်သောတဆေး (1 ဆ) ၏ 20 ဇွန်း
1 လက်ဖက်ရည်ဇွန်းဆားကော်ဖီ (7 ဂရမ်)
ထို့နောက်အရောအနှော၏ဗဟို၌အပေါက်ကိုရေထဲမှာရော ajoutezla တဆေးကိုလုပ်ပါ။
30 မိနစ်အကြောင်းကိုမုန့်ကိုငြိမ်ဝပ်စွာနေကြပါစို့။ ထို့နောက်မိနစ် 220 25 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှာ preheated မီးဖိုတဖို၌ထိုမီးဖုတ်ထားသောကုန်အံ့။
လိုချင်သောချက်ပြုတ်အမျိုးအစားအဆိုအရမုန့် Watch ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့မီးဖိုဆွဲထုတ်ကြောင့်စားသုံးမတိုင်မီအအေးကြကုန်အံ့။
သင်ဆဲဒီပေါင်မုန့်ကောက်ပြင်ဆင်ထားရန်ကြိုးစားခဲ့ခြင်းနှင့်စာလုံးပေါင်းပြီမဟုတ်လော ယခုတွင်သင်သည်ယင်း၏အကျိုးခံစားခွင့်နှင့်၎င်း၏စာရွက်သိသော, အားလုံးအကြိုးခံစားစေရန်အိမ်တွင်းကအောင်လက်လွတ်မ မိသားစု.
ကျွန်တော်တို့ရဲ့စွန့်ပစ်ခြင်းမှာချက်ပြုတ်နည်းများပေါင်မုန်ထားရှိခြင်းကအလွန်အထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ အမှန်မှာထိုမုန့်လုနီးပါးမည်သည့်ဟင်းနှင့်အတူလိုက်ပါနိုင်မယ့်အစားအစာကိုဖြစ်ပါတယ်။ Read more »
ဘယ်လိုအသီး5လွယ်ကူသောချက်ပြုတ်နည်းများတစ်ခုပြုတ်ရည်ပြင်ဆင်ထားရန် - သင့်ကျန်းမာရေးကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေ
သငျသညျခစျြလိမျ့မညျ3quinoa သုပ်! - သင့်ကျန်းမာရေးကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေ